Obi ụtọ na Gold EA Review - Best Forex Who Am si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
HomeObi ụtọ na Gold EAObi ụtọ na Gold EA Review
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- Obi ụtọ na Gold EA 3
E nwere nchịkọta dị iche iche 2 nke Obi ụtọ na ọkachamara ọkachamara ọkachamara dị ugbu a:
Obi ụtọ na Gold EA Nyochaa - Ndụmọdụ Ndị Ọkachamara Egosi Ego Forex Maka XAUUSD Trading
Obi ụtọ na Gold EA bụ ọhụrụ FX Expert Advisor kere site Obi ụtọ na Forex otu ndi oru ahia.
Nke mbụ, Obi ụtọ Gold Forex Robot na-eji -emekarị atụmatụ na gosipụtara ZigZag, nke na-arụ ọrụ na XAUUSD debe na oge 30 nkeji oge. Egwuregwu ZigZag gosipụtara ma gosipụta ihe dị mkpa nke eserese. Ebe dị anya n'agbata isi ihe ndị a bụ nhata ma ọ bụ karịa karịa pasent ahụ kpọmkwem maka ọnụahịa ọnụahịa. Ndị mmepe eji 99.90% kachasị mma na Metatrader 4 (MT4) maka nkwụsi ike na uru kacha mma.
The Forex EA eji nkwụsị na-akwụsị (-24 pips) ma nwee ike ịba uru na-adabere n'ahịa ahụ. Anyị na-akwado ka elu 40 pips na-agbasa, nkedo dị ala (Onye na-ere ahịa) na Njikọ API (Ọ bụghị ọnọdụ). Ị nwere ike ịtọ ya ngwa ngwa n'ime nkeji.
Obi ụtọ na Gold si uru kachasị mma: Ịmegharị ahịa mgbe niile bụ ihe mere nke a Forex robot ka na-enweta uru kemgbe 2010. Ị na-enweta nkwado zuru oke ma otu ahụ dị njikere mgbe niile inyere gị aka!
Obi ụtọ na Gold EA e mepụtara site otu ọkachamara otu ndị ahịa na-achọ ịhụ gị ịga nke ọma!
Jiri nke Obi ụtọ na Gold EA na-atụgharị gị ego n'ime ọlaedo!
Mfe ego na-enweghị mgbalị ọ bụla bụ ihe Obi ụtọ na Gold EA ihe nile gbasara. Mgbe ọnụọgụ abụọ, Shinekpa na njedebe nke azụmahịa gị nyere gị, Robot na-eweghara ma na-ejikwa azụmahịa niile maka gị. Nke a na-enye gị ohere ịchịkwa mgbe ị na-elekwasị anya ike gị n'ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Obi ụtọ na Gold EA - Banyere Trading Logic, Mbido na ndị ọzọ chọrọ
Obi ụtọ na Gold EA trades na ụfọdụ awa, nyochara na-ekpebi ndị price direction maka ọzọ di na nwunye awa ma ọ bụ ụbọchị. Ọzọkwa a ọkachamara-enye Ndụmọdụ-enye gị ohere ahia na kpọmkwem dị ize ndụ ma na-achọsi ike profitability. The trading usoro rite nnukwu uru na-emepe trades kwa ụbọchị.
The FX robot na-eji usoro nchapu / ntụgharị ma jiri ZigZag gosipụtara, ọrụ kachasị mma na XAUUSD na M30 / H1 / H4 eserese. Egwuregwu ZigZag a gbanwere nke ọma ma jikọta isi ihe dị na chaatị ahụ, ebe dị anya n'etiti isi ihe ndị a bụ hà ma ọ bụ karịa karịa pasent ahụ kpọmkwem maka ọnụahịa ọnụahịa. Ndị okike jiri 99.90% kachasị mma na Metatrader maka nkwụsi ike na uru kacha mma. Max oghe ahia bụ otu. Na-eji ike ịkwụsị ọnwụ (-24 pips) na ike na-enweta uru uru dabeere na echiche ahịa. Anyị na-akwado ka elu 20 pips na-agbasa, nkedo dị ntakịrị (ECN / Market Maker).
Ogologo kachasị dị mkpa na ọnụahịa kwesịrị ịbụ $ 1000. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụsị $ 1000, ịnwere ike imeghe otu akaụntụ na ego nke dịka $ 10 ma ọ bụ karịa.
Nwelite ohuru EA Obi ụtọ na Gold v1.1
New update Obi ụtọ Gold v1.1 gbakwunyere ntọala ọhụrụ: Ntọala ntọala: TP, SL na Trailing Kwụsị ma gbakwunye ọzọ Trailing Stop2 n'ọnọdụ karịa mbụ TS agaghị eme. FixLot: Size nke mbụ oghe oghere. Mgbe ị setịpụrụ Ọdachi na 0 EA ga-eji FixLot.
Nwelite ohuru EA Obi ụtọ na Gold v1.2
ntọala ọhụrụ agbakwunyere: Oge ezumike, ahia n'ụbọchị / awa, Send Email, Setting Scalp
Nwelite ohuru EA Obi ụtọ na Gold v1.3
dozie 4 / 5 digit
dozie njehie na-ere ma ọ bụ zụta ahia
Nwelite ohuru EA Obi ụtọ na Gold v1.4
agbakwunyere ọhụrụ: Bụrụ anya na A. ahia ahia / B. Oge ahia
Nwelite ohuru EA Obi ụtọ na Gold v1.5
agbakwunyere ọhụrụ: anya - anya site na ihe ngosi ebe etinye ebe ahia na echere.
Nwelite ohuru EA Obi ụtọ na Gold v1.6
gbanwere SL / TP mgbe emeghere ruo nkwụsị ire ere / ịzụta usoro
Nwelite ohuru EA Obi ụtọ na Gold v1.7
dozie mgbanwe SL / TP mgbe emeghere rue nkwụsị ire ere / ịzụta usoro maka 35ms
Nwelite ohuru EA Obi ụtọ na Gold v1.7.1
Ntọala gbanwere Swing + bonus MT5 version
Nwelite ohuru EA Obi ụtọ na Gold MT4 v1.8 na EA Obi ụtọ Gold MT5 v2.0
gbanwee koodu isi iyi maka MT4 rụọ 1170 na MT5 rụọ 2007
AutoGMT - Nchekwa onwe GMT dika onye ahia gi
Obi ụtọ na Gold EA - Naanị Ngwá Ọrụ Azụmaahịa Need Chọrọ Maka XAUUSD Trading
E nwere nnọọ olileanya na-adịghị ize gwụsịrị na Obi ụtọ na Gold EA n'ihi na creators nke a software nkwa a karịa 89% ịga nke ọma ọnụego na ga-enye Verified pụta.
Obi ụtọ na Gold EA bụ ozugbo dị na ụgwọ a na-apụghị ikweta ekweta, ntụgharị naanị 209.30. N'ihi ya, echela ka ijide gị!
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Gọọmenti Na-enye Obi ụtọ EA EA
EA Obi ụtọ na Gold
EA Obi ụtọ na Gold Review
Obi ụtọ na Gold
Obi ụtọ na Gold Expert Advisor
Obi ụtọ na Gold Forex robot
Obi ụtọ na Gold Forex robot Review
Obi ụtọ na Gold Review
Obi ụtọ na Gold robot
Obi ụtọ na Gold robot Review
Forex Specter EA Nyocha
1 Nza aza
3 Kedu ndị edemede
GỤKWU NDỊ EKWUKWU - EKWUKWỤKWỌ ỤLỌ NTỤKWỤKWỌ NKWUKWỤKWỌ NDỊ NKWUKWU NDỊ CHINEKE 2017 - 30% Gbanyụọ Onye enyi ibe gị Forex, NEWS! Obi ụtọ Gold EA dị na ọnụahịa ugbu a! Nweta ozi ndị ọzọ na bonuses ebe a: https://www.bestforexeas.com/happy-gold-ea-review/ Obi ụtọ Gold EA bụ ọkachamara ọkachamara FX ọkachamara kere site na Happy Forex team of professionals. Nke mbụ, Obi ụtọ Gold Forex Robot na-eji usoro eji eme ihe na ngosi ZigZag nke gbanwere, nke na-arụ ọrụ na sistema XAUUSD na oge 30 nkeji oge. Egwuregwu ZigZag gosipụtara ma gosipụta ihe dị mkpa nke eserese. Ebe dị anya n'agbata isi ihe ndị a bụ nha... GỤKWUO "
Hi Dara, Thanks for your interest in Happy Gold EA! Happy Gold EA is an innovative and FULLY AUTOMATED FX Expert Advisor created by the Happy Forex team of professional traders. First of all, Happy Gold Forex Robot uses trend strategy with modified ZigZag indicator, that works on the XAUUSD chart with 30 minute time frame. Modified ZigZag indicator tracks and connects extreme points of the chart. The distance between these points being equal or higher than the percentage specified for the price scale. The developers have used 99.90% optimization in Metatrader 4 (MT4) for the best stability and profits. The Forex EA uses... GỤKWUO "